सिके राउत फेरिएलान् : कामरेड ओली सुध्रिदैनन् » Nepal Fusion	Nepal Fusion	सिके राउत फेरिएलान् : कामरेड ओली सुध्रिदैनन् » Nepal Fusion
सिके राउत फेरिएलान् : कामरेड ओली सुध्रिदैनन्
२०७६ असार १७ गते मङ्गलवार
बर्षाै जेल बसेको नेता प्रधानमन्त्री बन्दैमा, देशमा समृद्धि हुदैन : परिवर्तन गर्न इतिहास होइन, सोच चाहिन्छ – घनश्याम भुसाल बेला–बेला भन्छन् । धेरै बर्ष जेल बसेका प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओली दोस्रो कार्यकाल प्रधानमन्त्री बनेका छन् । देशमा गणतन्त्र स्थापना गर्न यीनै ओलीको केही हदसम्म योगदान छ । कहिलेकाही ओलीका गफ सुन्दा लाग्छ कि, ओलीकै कार्यकालमा नेपाल बिकसीत देश बनिहाल्छ ? प्रधानमन्त्रीले धेरै नयाँ र सम्भावना भएका सपनाहरु देखेका छन् । यी कुनै अनौठा र गर्नैनसक्ने कुरा पनि होइनन् । तर उनको पछिल्लो कार्यशैली देख्दा लाग्छ, सपनाको ब्याज खाइरहेका छन् ।
निर्वाचनताका कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा भन्ने कम्युनिस्टको सरकार आए, अधिनायकवाद आउछ र जनताले रुन पनि पाउदैनन् । आजकाल ओली र उनका मन्त्रीहरुका तमासा देख्दा लाग्छ, देउवा सत्य बोलेछन् । मिडिया काउन्सिल विधेयक पास भए पत्रकारितामा अंकुस लाग्ने छ । गुठी विधेयक पास भए धर्म, सांस्कृति नै मासिन्छ । अब अरु विधेयक चर्चा नगरौ । यस्ता सुन्दा र जे सुन्दा पनि सरकार प्रति आक्रोष बढ्दै जान्छ । राजनीतिक मुद्दामा सरकारले विप्लव निकट नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाईयो । हिजोका दिनमा हजारौं मान्छेको ज्यान लिने हिंसात्मक आन्दोलनमा पत्रहरु नै सरकारका मन्त्री छन् तरपनि आज उनै पुर्बसहकर्मीलाई जाल थापिरहेका छन् । राजनीतिक एजेन्डा, राजनीतिक तहबाटै समाधान गर्न सक्ने उपायहरू हुदा–हुँदै सरकार किन, गतल बाटो हिडिरहेको छ ।
विवादास्पद सिके राउतलाइ यिनै ओलीले राष्ट्रिय राजनीतिमा ल्याए । यो राम्रो काम थियो तर उनीसंग गरिएका कतिपय सहमति भने राष्ट्रियता विपरीत रहेका छन् । राष्ट्रियतामा आँच आउने गरि किन सम्झौता गरियो, उनै ओली र गृहमन्त्री बादलले जानुन् । राउत कता–कता फेरिन थालेका छन् । केहिदिन अघि बिरुवा रोप्ने भन्दै हल्ला गर्न समेत भ्याए । उनका पछिल्ला गतिविधिहरु राम्रा नै देखिन्छन् । तर राउतलाई राम्रो बाटोमा ल्याउने प्रधानमन्त्री ओली किन दिनानुदिन आलोचित बनिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले होटल हायातमा रमिता देखे र देखाएपनि । होली वाईन पिएपछि आजकाल किन ओली उदेकलाग्दो बाटोमै यात्रा गरिरहेका छन् । वालुवाटार जग्गा काडमा उनकै दाईने हातका माईलो औलाको नाममा छ । वाइडवडि काण्ड खै कता गयो । हुदा–हुदा राज्यकोषबाट अरबौ पैसा कार्यक्रतामा किन बाँडे ।
के यी निर्णयहरु राम्रो छ । यसको पक्षमै बोल्नुपर्ने हो ? के यो जनभावना अनुरुप छ । हुदा–हुदा आजकाल कार्यक्रममा ओलीलाई बस्न सबैभन्दा अगाडि, सबैभन्दा फराकिलो र सबैभन्दा ठुलो स्थान समेत चाहिदो रहेछ । के गणतन्त्र ल्याए बाफतको ब्याज पिईरहेको अबस्था हो ? ओके प्रधानमन्त्री ज्यु जे हुन्छ राम्रैका लागि हुन्छ । अघि बढ्नुहोस् । जय लुटतन्त्र, जय ओलीतन्त्र ।
रोल्पामा चुनावलाई लक्षित गरि खुकुरी प्रहार
ड्राइभिङ लाइसेन्सको आबेदन खुल्दै: फारम भरेको १५ दिन भित्र परिक्षा दिन पाउने
दाङमा तीन जना सवार मोटरसाइकल दुर्घटनाः आमाको मृत्यु, दाजु बहिनी घाइते
आइतबार देशभर सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय
अनलाइन दर्तापूर्व अभिमुखीकरण जरूरीः काउन्सिल
पर्सामा मोटरसाइकल ठोक्किंदा २ जनाको मृत्यु, ३ जना घाइते